Caribbean Tourism: Vanosvika vakadonhedza 65.5% muna 2020
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Caribbean » Caribbean Tourism: Vanosvika vakadonhedza 65.5% muna 2020
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Kurwisa • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • Shopping • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Nezvirambidzo zvehurumende zvese muCaribbean uye pasi rese zvichidzikisira, uye muzviitiko zvakawanda, zvichidzivirira kufamba kwenguva yakareba, maCaribbean akadonha zvakanyanya kune vanosvika mu2020.
Caribbean Tourism Sangano rinoburitsa Caribbean Tourism Performance Report 2020
Dhata kubva kuCTO nhengo dzenyika dzinoratidza kuti vashanyi vanosvika mudunhu muna 2020 vakawira kungodarika mamirioni gumi nerimwe
Chikamu chechipiri chaive chakanyanya kuitisa nevanosvika pasi ne97.3 muzana
Mhiri kweCaribbean, iko kuitika kwe COVID-19 pane yekufambisa neyekushanya indasitiri zvave pachena. Mhedzisiro yacho yainyanya kuoneka panguva yaKubvumbi kusvika pakati paJune apo pakanga pasina chaicho chiitiko mune dzimwe dzatinoenda.
Izvi zvaizivikanwa nemahotera nemaresitorendi asina chinhu, zvinokwezva zvisina vanhu, miganhu yakavharwa, vashandi vakadzingwa basa, ndege dzakadzika pasi uye nemitsetse yevakaremara. Kunyange isu takaona kumwe kuchinjika mumatanho evashanyi kwemwedzi yasara ye2020, kuwanda kwevashanyi hakuna kusvika pamatanho zvakada kufanana neaya ane ruzivo pamberi paKurume 2020. Naizvozvo, dzimwe nzvimbo dzinoramba dzakapfigwa kune vashanyi, dzine mashoma nendege kunyanya kudzosera veko nhumbi.
Migwagwa yechikepe inofamba nemigwagwa yeCaribbean inoramba isinga shande nekuda kwekurambidzwa kwakasimba kwakaitwa neUS Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Nezvirambidzo zvehurumende zvese muCaribbean uye pasi rese zvichidzikisira, uye muzviitiko zvakawanda, zvichidzivirira kufamba kwenguva yakareba, maCaribbean akadonha zvakanyanya kune vanosvika mu2020, kunyangwe dunhu rakaita zvirinani kupfuura chero imwe nharaunda pasi rese.
Dhata rakagamuchirwa kubva Caribbean Tourism Sangano (CTO) Nhengo dzenyika dzinoratidza kuti vashanyi vanosvika mudunhu muna 2020 vakadonhera kungodarika mamirioni gumi nerimwe, zvakadzikira ne11 muzana kana zvichienzaniswa nezvakanyorwa 65.5 mamirioni evashanyi muna 32.0. Zvakadaro, izvi zvaive nani kupfuura wepasirese wepasi rose we2019 muzana muzana nguva imwecheteyo.
Iyi yakaderera mwero yekudzikira mudunhu inogona kuverengerwa kuzvinhu zviviri zvakakosha: chikamu chakakosha chemwaka wechando weCaribbean (Ndira kusvika pakati paKurume 2020) yakaona huwandu hwepakati pevashanyi vanosvika kana vachienzaniswa ne2019, uye chokwadi icho chikuru ( chirimo) mwaka mune mamwe matunhu zvinoenderana nenguva iyo kwaiwanzo kuve nekushomeka kwekufamba kwenyika.
Iyo nguva yekushomeka kwekushanya yakatanga pakati paKurume - iyo yechipiri kota ndiyo yainyanya kuita nevasviki pasi ne97.3 muzana. Asi vashanyi vakatanga kushanya zvakare muna Chikumi chikamu ichi chakatanga kuvhurwa. Zvakadaro, kudonha mukuuya kweva stayover kwakapfuurira kusvika munaGunyana - pakachinja zvishoma nezvishoma - ndokuenderera mberi kusvika Zvita. Zvirongwa zvekuenda kunzvimbo dzakadai sehurongwa hwekugara-kwenguva refu, zvimwe zvekusimudzira uye kuyedza kwemasangano enharaunda akadai seCCTO, iyo Caribbean Hotel neKushanya Association uye neCaribbean Public Health agency, zvakabatsira mukukwira zvishoma nezvishoma kwevanosvika.
Kufanana nevanosvika stayover, ngarava yakakwenenzverwa nemitambo mumwedzi mitatu yekutanga yegore ra2020, kunyanya mwedzi waKukadzi, pakanga paine kukwira kwe4.2 muzana mukushanya. Nekudaro, iyo 20.1 muzana inodonha mukota yekutanga yakateverwa pasina chiitiko kune yakasara yegore sezvo ngarava dzakaramba dzisingashande. Mhedzisiro yacho yaive 72 muzana muzana inotsvedza kusvika ku8.5 mamirioni ekushanya, kana ichienzaniswa nemamirioni makumi matatu ekushanya mu30.
Kufamba kushoma kupfuura kwemwedzi miviri nehafu yekutanga kwegore, kwakakonzera matambudziko mukunyora nhamba dzemashandisirwo evashanyi muna 2020. Zvisinei, zvichibva paruzivo rwakatorwa kubva kune vanobatirana pasirese vakaita seUNWTO, uye kushomeka kushoma kwenyika dzeCaribbean , tinofungidzira kuti mudunhu rese mari inoshandiswa nevashanyi yakadzikira nezvikamu makumi matanhatu kusvika makumi masere muzana, zvinoenderana nekuderera kwevano fika vafambi.
Yekutanga data inoratidza kuti avhareji kureba kwekugara kwe2020 kwakasara paanenge husiku hunomwe, zvakafanana neka2019.
Kuita kweCaribbean muna 2021 kunoenderana zvikuru nekubudirira kwezviremera mumusika nedunhu mukurwisa, zvine uye nekudzora hutachiona. Patova nezvimwe zviratidzo zvinokurudzira sekubuda kwejekiseni kunoitika kuNorth America, Europe neCaribbean.
Nekudaro, izvi zvinofanirwa kudzikamiswa nezvimwe zvinhu zvakaita se: kukiyiwa mumisika yedu yakakosha sosi inotarisirwa kuenderera mukota yechipiri, chivimbo chekufamba kwenyika dzisingatarisirwe kutora kusvika zhizha 2021, kudonha kwakadzika muhuwandu hwevanhu kuronga kuenda kunze kwenyika uye izvo zvinogona kudikanwa nevakuru mumisika yedu yakakosha yevagari vavo kuti vachengete vasati vaenda kunze kwenyika.